On1.click | ဟောက်မေယာ၏ ဂြိုဟ်ရံလများ
... ပု ဟောက်မေယာတွင် နာမကာနှင့် ဟီယကာဟုအမည်ရသော ဂြိုဟ်ရံလနှစ်စင်းရှိသည်။ ...
ဟာဘယ်တယ်လီစကုပ်မှရုပ်ပုံအားရရှိသည့် ဟောက်မေယာနှင့် ယင်း၏ဂြိုဟ်ရံလနှစ်စင်းအား ပုံဖော်ထားပုံ။
ဟောက်မေယာ၊ ကွင်းနှင့် ဂြိုဟ်ရံလနှစ်စင်း၏ ပတ်လမ်းများ
နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဘက်ရှိ ဂြိုဟ်ပု ဟောက်မေယာတွင် နာမကာနှင့် ဟီယကာဟုအမည်ရသော ဂြိုဟ်ရံလနှစ်စင်းရှိသည်။ သေးငယ်သော ယင်းဂြိုဟ်ရံလများကို ဟာဝိုင်အီရှိ W. M. Keck Observatory မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဟောက်မီယာအား လေ့လာစောင့်ကြည့်ရင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဟီယကာသည် အပြင်ဘက်အကျဆုံးဖြစ်ပြီး ထုထည်အားဖြင့်လည်း ပိုမိုကြီးမားသည်။
နာမကာသည် ဟောက်မေယာအား ၁၈ ရက်လျင် တစ်ပတ်နှုန်း ဘဲဥပုံစံပတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း လှည့်ပတ်နေပြီး ဟီယကာသည် ၄၉ ရက်လျင် တစ်ပတ်နှုန်းဖြင့် စက်ဝိုင်းပုံစံနီးနီးပတ်လမ်းကြောင်းဖြင့် လှည့်ပတ်နေသည်။
↑ M. E. Brown (2005-09-02). "Keck Observatory Laser Guide Star Adaptive Optics Discovery and Characterization ofaSatellite to the Large Kuiper Belt Object 2003 EL61". The Astrophysical Journal Letters 632 (1): L45–L48. doi:10.1086/497641. Bibcode: 2005ApJ...632L..45B.